Jonas Vakoma Vanobatsira Kusimudzira Spatial Audio paApple Music | Ndinobva mac
Jonas Hama Vanobatsira Kusimudzira Spatial Audio paApple Music
Apple Music inoenderera ichikura raibhurari yenziyo dzinosanganisira Spatial Audio. Sechinhu chitsva, ikozvino unogona kuteerera maJonas Brothers paDolby Atmos. Mufaro Unotanga album yeiyo bhendi yave kuwanikwa kusanganisira yekurasikirwa odhiyo zvakare. Nhau idzi dzakagovaniswa nevaartist ivo pachavo, ine tweet ichibatanidza vanhu kune iyo albham pane Apple Music.
Spatial Audio uye Lossless Audio vauya kuApple Music kuti vagare. Chinhu chitsva icho chishamiso chaicho uye icho chinofanira kutorwa mukana nacho. Apple yanga iri mukutungamira kwekuzvizivisa, asi chii chiri nani pane maartist ivo pachavo kuisa mukutarisa kwese kugona kweiyi nyowani tekinoroji (nyowani muApple, hongu) uye kana pamusoro peizvozvo, avo vari maneja ndivo Hermanos Jonas, zvirinani kupfuura zvirinani.
Kuburikidza nesocial network Twitter, maartist aya azvitora ivo pachavo kuzivisa vese vanyoreri veApple Music nekutaura kuti yavo nyowani dambarefu inogona kunzwika nenzvimbo yekuteerera uye pasina kurasikirwa.
Apple's spatial odhiyo ficha yakaratidza kufarirwa, kunyangwe paine mashoma mabhureki anogona kuve nawo. Apple Music's own spatial audio playlist inosiya zvakawanda zvingadiwa, ehe, zvirinani izvozvi uye pasina kudzora kubva kuJonas Brothers. Nekudaro iwo wakagadziridzwa Mufaro Unotanga unoda kunzwikwa kuburikidza neakakwirira ekupedzisira mahedhifoni uye kushandisa DAC Ndicho chimwe chinhu vazhinji vedu chisingakwanise, lkana chii chinoita kuti AirPods Max ive sarudzo huru Kune vanhu vazhinji.
Isu tinofungidzira kuti zvishoma nezvishoma mabasa aya anovandudza uye anoenderana nezvinodiwa nemushandisi wepakati. Izvo zvirinani tinoda kutenda uye tinoda kutenda kuti zvichadaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Jonas Hama Vanobatsira Kusimudzira Spatial Audio paApple Music
TSMC ikozvino yakagadzirira kugadzira 3nm machipisi eApple
Yakakombama iMac M1 kumira, mwedzi mitatu yemahara yeApple TV +, uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac